ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာကို ပံ့ပိုးပေးသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သုတေသန အဆောက်အအုံများ
မကြာသေးမီက တိုးပွားလာသော လူဦးရေနှင့် စွမ်းအင် လိုအပ်ချက်များကြောင့် အစားအစာထောက်ပံ့ရေးသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ရပ် ဖြစ်လာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို ကာကွယ်လျက် ရေရှည်တည်တံ့သော စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များပျက်စီးမှုမရှိစေရန်နှင့် အစားအစာလုံလုံလောက်လောက်ထောက်ပံ့နိုင်ရန် စသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။
ထိုပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန် သော့ချက်သည် မတူကွဲပြားသော စွမ်းအင်များကို အသုံးပြုရန်အပြင် စွမ်းအင်အသုံးပြုရာတွင် ပိုမိုအကျိုးရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဇီဝနည်းပညာကိုအသုံးပြုသော ငါးလုပ်ငန်းများကိုလည်း တည်ထောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
နောက်မျိုးဆက်အတွက် လိုအပ်သော အဆင့်မြင့်နည်းပညာများကို ရှာဖွေစူးစမ်းရန် Yanmar ရှိ ကျွန်ုပ်တို့သည် အနာဂတ်အတွက်ရှေးရှုသော သုတေသနနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။
၂၀၀၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Yanmar လုပ်ငန်းစုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗဟိုသုတေသနသိပ္ပံကို လှပသော Maibara City၊ Shiga Prefecture ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုပင်မစင်တာအဖြစ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးကာလတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်စေရန် အလေးထားခဲ့ပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအတွေးအခေါ်ကို ထည့်သွင်းပေါင်းစပ်ထားသော ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုမရှိသည့် တည်ဆောက်ပုံအားဖန်တီးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစင်တာတွင် နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာများကို အသုံးပြုထားသော အဆင့်မြင့် သုတေသနစက်ပစ္စည်းများကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။
ဗဟိုသုတေသနသိပ္ပံတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် စွမ်းအင်နှင့်အသုံးချမှုများကို ထောင့်ပေါင်းစုံမှနေ၍ သုတေသနပြုလျက်ရှိပါသည်။
2481 Umegahara, Maibara City, Shiga, 521-8511 Japan
သုတေသနနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုစင်တာသည် ၆၀ နှစ်ပြည့်အခါသမယကိုပင် ဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်
Kota Kinabalu​၊ မလေးရှားရှိ Yanmar Kota Kinabalu R&D စင်တာသည် ဇီဝလောင်စာသုတေသနအတွက် အာရှရှိ ဌာနအသစ်ဖြစ်ပြီး (ဂျပန်၊ Shiga ရှိ) သုတေသနနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုစင်တာနှင့်ပူးပေါင်း၍ ဇီဝလောင်စာအပါအဝင် စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အသစ်များအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနများကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
အရင်းအမြစ်များ ကုန်ခန်းခြင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုတို့တွင် ပိုမိုဖိအားများလာပြီး Yanmar သည် အရင်းအမြစ်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ကို အများသတိပြုမိလာစေရန် အရှိန်မြှင့်တင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် စွမ်းအင်ထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုခြင်းတွင် ရှေ့ဆောင်လမ်းသစ်ဖောက်သူအဖြစ် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် Florence၊ အီတလီ၌ တည်ထောင်ခဲ့သော Yanmar R&D Europe S.r.L. (YRE) သည် Yanmar လုပ်ငန်းစု၏ ဥရောပရှိ ပထမဆုံး သုတေသနနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုစင်တာဖြစ်သည်။ YRE ၏ရည်မှန်းချက်မှာ စွမ်းအင်ကိုထိရောက်စွာ အသုံးချရေး အတွက် မျိုးဆက်သစ်နည်းပညာကို ဖန်တီးရန် ဖြစ်ပါသည်။
စွမ်းအင်နည်းပညာ- ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုသော ဒေသတွင်း စွမ်းအင်ကွန်ရက်နည်းပညာ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် တီထွင်ဖန်တီးခြင်း။
စက်ယန္တရား နည်းပညာ- HMI နှင့် ထိန်းချုပ်ကိုင်တွယ်ခြင်းကို အသုံးပြုသော အဆင့်မြင့်စက်ရုပ်တီထွင်အသုံးချမှုပညာအပါအဝင် စက်မှုယန္တရား၏ နောက်မျိုးဆက်ကို သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း။
ထိုနည်းပညာနယ်ပယ်နှစ်ခုတွင် ရေရှည်နှင့် ရေလတ် ရည်မှန်းချက်များကို ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒေသတွင်းတက္ကသိုလ်များအပါအဝင် မျိုးစုံသော သုတေသန အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးပေါင်း၍ သုတေသနပဏာမခြေလှမ်းများကို အရှိန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
သုတေသန ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဈေးကွက်အတွက် ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသောထုတ်ကုန်အသစ်များ ဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်၍ Yanmar လုပ်ငန်းစု ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုစင်တာများကြား မျှဝေပါသည်။
အဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူ စမ်းသပ်မှုစက်ရုံ (ပီစာအနီးတွင် တည်ရှိသည်)
ဇီဝလောင်စာဆီကို ဓာတ်ငွေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း စမ်းသပ်မှုစက်ရုံ (မီလန်အနီးတွင် တည်ရှိသည်)
YANMAR R&D Europe S.r.L. Viale Galileo 3/A 50125၊ Firenze Italy
ဖုန်း- (+39) 055 512 1694
ငါးမွေးမြူရေးနယ်ပယ် ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အထူးပြု သုတေသနစင်တာဖြစ်သည့်အလျောက် ဇီဝဆန်းသစ်တီထွင်မှုစင်တာ ပင်လယ်စာမွေးမြူရေးသည် ငါးနှင့် အခွံမာရေနေသတ္တဝါထုတ်လုပ်မှုတိုးချဲ့ရန်အတွက် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့် ပေါင်းစပ်၍ အဏ္ဏဝါစိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးအဆောက်အအုံများ၊ အစာကျွေးခြင်း၊ အစေ့ပျိုးခြင်းတို့ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုမှတဆင့် ရေရှည်တည်တံ့ပြီး ဘေးကင်းသော အဏ္ဏဝါစိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူထုတ်လုပ်ရေးစနစ်များကိုတည်ဆောက်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဇိဝဆန်းသစ်တီထွင်မှုစင်တာ Kurashiki ဓာတ်ခွဲခန်း
"လူတိုင်းအတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော ပြည့်စုံကြွယ်ဝမှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်"။
ယင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကြေညာချက်ဖြစ်သည့် "ရေရှည်တည်တံ့သောအနာဂတ်" ၏အနှစ်သာရဖြစ်သည်။ ယခုမှစ၍ နှစ် ၁၀၀ ကြာသည့်အခါ လူသားများသည် ဘေးကင်းပြီး ပေါကြွယ်ဝသည့်အစားအစာများကို စားသုံးနိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤနှစ်များအတွင်း စုဆောင်းရရှိလာသော အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရန် သဘာဝစွမ်းအင်ကိုထိန်းချုပ်အသုံးချခြင်းတို့အား အဆင့်မြှင့်တင်ရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။
ဇီဝဆန်းသစ်တီထွင်မှု စင်တာ Kurashiki ဓာတ်ခွဲခန်း
ရေရှည်တည်တံ့သော လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များကို ဖန်တီးခြင်း။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူသားများအတွက် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးခြင်း။
Shandong ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ R&D စင်တာသည် စွမ်းအင် လုံလောက်စေခြင်း၊ ဘေးကင်းသော အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းသော စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော ပြဿနာပေါင်းများစွာကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရန် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်းလုပ်ငန်းများ၊ သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
14F-03 HNA CENTER၊ No.234 YANAN 3rd ROAD၊ QINGDAO၊ SHANDONG၊ CHINA P.R.C. 266071